Harare Yosvitsa Bhajeti Rayo re$370m kuHurumende
Mbudzi 08, 2013
HARARE — Kanzuru yeHarare yatura bhajeti rayo remazana matatu nemakumi manomwe emamiriyoni emadhora, iro riri kutarisira kushandisa gore rinouya, kana richinge ratambirwa nehurumende.
Harare inoti haisi kuzokwidza mitero yemvura nezvimwe gore rinouya.
Vachitura bhajeti iri pamuzinda wekanzuru muHarare, sachigaro wekomiti yekanzuru inoona nezvemari nemabasa ebudiriro, uye vari kanzura we Ward 18 – Borrowdale, VaIan Markham, vati mimwe mitero yakaita seyemvura, yemisika nemasiweji ichatoderedzwa munzvimbo dzese muguta.
Vatiwo mari inobviswa pakuviga kana kupisa vanhu, yemaamburenzi neyezvipatara zvekanzuru icharamba iri pairi.
Vati kanzuru inotarisira kuwana mari yese yainoda kubva kumitero yakasiyana siyana. Asi vati zhinji yacho ichabva kumitero yemvura, kutakurwa kwemarara pamwe nemari dzemitero yemba, zvitoro nemafekitari.
Vatiwo mari ingangosvika pachidimbu chebhajeti inoenda kumihoro yevashandi. Vatiwo kanzuru yavo iri kuedza napose painogona napo kuti ideredze mari iyi kusvika pazvikamu makumi matatu kubva muzana sezvinodiwa nehurumende.
Pamari yese iri mubhajeti, VaMarkham vati makumi mapfumbamwe nechidimbu chemamamirioni emadhora ichashandiswa pamabasa ebudiriro akaita sekuvandudza zvigayo, pombi dzemvura, pamwe kugadzirisa migwagwa.
Varatidza kusafara nenyaya yekuti kambani yehurumende ye Zimbabwe National Road Authority, Zinara, iri kupa kanzuru yeHarare mari shomanana kana zvichienzaniswa nemari yavanotarisira kuwana kubva kumitero yemotokari.
Vati gore rino Zinara yakavapa mazana manomwe nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora chete asi ivo vainge vakatarisira mari inodarika mamiriyoni gumi nemashanu emadhora.
Vati mukuronga bhajeti ra 2014, vakatorawo pfungwa dzevagari vemuHarare, vemabhizimisi nevamwe. Vatiwo kubudirira kwebhajeti iri kunoda kuti vanhu vashande pamwe chete vachibhadhara mitero kukanzuru.
Pari zvino vagari nevemabhizimisi vane zvikwereti zvinosvika mazana maviri negumi nemaviri emamiriyoni emadhora kukanzuru yeHarare.
Vatiwo kanzuru yavo ine zvikwereti zvingangosvika mazana maviri emamiriyoni emadhora kuvashandi nevamwe vainoshanda navo.
Bhajeti rekanzuru rakatambirwa nemakanzura eguta iri, uye ramirira kutambirwa negurukota rezvematunhu, kuti rive pamutemo.